Breaking News : सभामुख र प्रचण्डलाई एकसाथ जेल हाल्न ओलीको यस्तो निर्देशन ! – AB Sansar
Breaking News : सभामुख र प्रचण्डलाई एकसाथ जेल हाल्न ओलीको यस्तो निर्देशन !
December 20, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on Breaking News : सभामुख र प्रचण्डलाई एकसाथ जेल हाल्न ओलीको यस्तो निर्देशन !
पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले जीवनमा नसोचेको घटना भयो । राजनीतिक सरगर्मी बढिरहेका बेला उनलाई नियोजित घटना गराइयो भन्ने निश्कर्ष छ । अहिले फेरी अर्का सभामुखमाथी त्यही हुन लागेको चर्चा गरिदैछ । राजनीतिक दाउपेच बढिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले सभामुख अग्नि सापकोटाको मुद्दा पेसीमा चढाएको छ ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
सापकोटाको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबरा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासमा परेको हो । यसअघि ३० फागुन २०७६ मा यो मुद्दा पेसीमा चढाइएको थियो, तर हेर्न नभ्याएपछि सुनुवाई सरेको थियो । त्यही मुद्दाको पेसी शुक्रबार तोकिएको छ ।
सापकोटामाथि काभ्रेका अर्जुन लामाको मृत्युमा त्यो मृत्यु ज्यानसम्बन्धि उद्योग भएकार र त्यसमा संलग्न भएको आरोप छ । १६ वैशाख २०६२ मा श्रीकृष्ण मावि, दाप्चामा अभिभावक भेला स्थलबाट लामालाई माओवादीका कार्यकर्ताले स्कुलबाट नै लिएर गएका थिए । साउन तेस्रो साता लामालाई खौलो खन्न लगाएर त्यहाँ नै पुरिदिएको भन्दै उनकी पत्नी पूर्णिमायाले २०६४ सालमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।
प्रहरीले जाहेरी लिएन । त्यसविरुद्ध पूर्णिमायाले सर्वोच्चमा रिट हालेपछि २२ फागुन २०६४ मा सर्वोच्चले आदेश दियो र जाहेरी दर्ता भयो । तर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सापकोटाविरुद्धको जाहरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो ।
त्यसविरुद्ध पूर्णिमाया फेरि सर्वोच्च गइन् । सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश दियो । यो मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला सापकोटा सञ्चारमन्त्री बनेपछि कणकमणि दीक्षित लगायतले सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना मुद्दा समेत हालेका थिए । अहिले फेरी यो बल्झिएको छ ।
राष्ट्रपतिद्वारा संसद् विघटन, २०७८ बैशाख १७ र २७ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन (विज्ञप्तिसहित)
नेपाली पत्रकारलाई अन्तरवार्ता नदिने ओलीले भारतीय पत्रकारलाई बोलाई बोलाई अन्तरवाता दिए र आँफै नां’गी:ए : रवि लामिछाने
January 13, 2021 January 13, 2021 Ab-संसार
November 26, 2020 Ab-संसार